How To kuzvichenesa zvikadaro Mazino Your | Nzira Yakanakisisa kuzvichenesa zvikadaro Mazino Guide
Posts tagged "sei kuti kuzvichenesa zvikadaro mazino ako"
Sei kuzvichenesa zvikadaro mazino vachishandisa kumba rakanga rachena nzira
Kubika mushaba inowanika mukicheni kusvika ose imba uye anobatsira sei kuti kuzvichenesa zvikadaro mazino ako. Vanhu vanoshandisa kubikira pasoda somunhu tastemaker. Baking mushaba unoshandiswawo kuti okuchenesa zvinangwa. Zvinoshanda zvinobudirira kubvisa kunzwa kwakanaka kubva mufiriji. Unogona kushandisa kubikira pasoda rokuchenesa mazino ako. Kubika mushaba zviri hasha zvakasikwa uye aya kunokubatsira kubvisa vara kubva wejira pamusoro mazino ako. Nezino zviitwe, tora nendiro pasoda, vashoma donhwe remvura uye nyoro bristled munyoro chikwesheso. Tora soda muruoko rwako uye kuwedzera madonhwe emvura pazviri kuti namatidza nayo. Zvino anyike chikwesheso kupinda namatidza uye kukwesha mazino enyu. Unogona kutevera nzira iyi sezvo zvikuru sezvo kamwe vhiki imwe neimwe.
Posted by kuzvichenesa zvikadaro Mazino Guide - Chikumi 4, 2016 pa 10:24 AM
Categories: Kuzvichenesa zvikadaro Mazino Tips Tags: musha mazino zviitwe, sei kuti kuzvichenesa zvikadaro mazino ako, kuzvichenesa zvikadaro mazino ako